By सपनासंसार November 29, 2009
सीमान्त लामिछाने अमेरीका कालो रङ्ग राम्रो रङ्ग चहकिलो रङ्ग सबैलाई सुहाउने रङ्ग सबैलाई रिझाउने रङ्ग कालो रङ्ग अपरिवर्तनीय छ सेतोमा कालो मिसाउ कालो हुन्छ रातोमा कालो मिसाउ कालो हुन्छ पहेँलोमा कालो मिसाउ कालो हुन्छ कालोमा कालो मिसाउ चहकिलो कालो हुन्छ त्यसैले कालो सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ त्यसैले होला आजभोली आंखाको सेतो भन्दा कालो भाग बढी देख्छु मान्छे कालो रंगमा घनिभूत देख्छु यो सगर पनि कालो देख्छु परको क्षितिज पनि कालो देख्छु कालोले घेरेर होला चन्द्रसुर्य र ताराहरु पनि अन्त्यमा कालो हुन्छ याहि कुरा बढि सोच्छु सोँच्दा सोँच्दै म सोच्छु अंगार कालो हुन्छ त्यो बल्छ बल्दा निस्कने धुवां त्यो पनि कालो हुन्छ अन्त्यमा त्यो खरानी हुन्छ कालो रंगको साम्राज्य म ठूलो देख्छु अनि कालो अंगार र खरानी म लस्करै देख्छु । here --> [यो प्रस्तुति कतै पुन प्रकाशित गर्नु परेमा स्रोत खुलाएर वा लेखकको पूर्ण सहमतिमा मात्र प्रकाशित गर्नुहुन अनुरोध छ । -सपनासंसार ]
आफ्नै गुनगुन,: हङ्कङ्ग एअर पोर्ट !
By सपनासंसार November 21, 2009
आफ्नो विभिन्न यात्रा को समयमा धैरै ट्रान्जिट हरुमा समय बिताउनु परेको थियो । ट्रान्जिट समयमा के गरौ के गरौ भैरहने यो पंक्तिकारलाई भने आजको हंङ्कङ्गको ८-१० घण्टे लामो ट्रान्जिट समय पनि कमिनै लाग्यो । सूचना प्रविधि (Information Technology) को क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताले पाउने सबैभन्दा सुविधामामुलक राष्ट्रको मेरो अड्कल बाजलाई आज हङ्कङ्गले पछारेको छ। भिजिटर भिसा को लागि समय अभावले गर्दा आफ्ना नातेदार तथा मित्रहरु अनि सपनासंसारका शुभेच्छुक मित्रहुरु हङ्कङ्गमा हुदाहुदै पनि भेट गर्न सकिएन । एक छिन त नियाँस्रो नै लागेको थियो तर पनि एअरपोर्टमा प्राप्त निसुल्क इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाले मेरो यो नियास्रोपन लाई उत्साह मा परिवर्तन गरिदियो । बढा गजब को ठाउँ रहेछ , हङ्कङ्गभरि जहाँ फोन गरे पनि निःशुल्क पो रहेछ बा् । अनि वाईरलेस ईन्ट्रनेट पनि नि:सुल्क , अनि यो कम्प्युटर कीरोलाई के नै चाहियो र ! ९ घण्टा को ट्रान्जिट पनि अपुरो नै लाग्यो। धीत मर्ने गरि कुरा गरे केही साथी हरुसंग मानौँ कि यस्तो कुराकानी प्रत्यक्ष भेटमा पनि हुँदैन । एअरपोर्ट कति सफा , कर्मचारीहरू कति सहयोगी , कस्तो राम्रो बेवास्ता, कहिले
The world’s most powerful people for the year 2009.
By सपनासंसार November 17, 2009
Forbes magazine recently has published the world’s most powerful people for the year 2009. Out of top 67 powerful people picked by Forbes around the globe, Barak Obama, President of United State has been listed as the most powerful person of the year. Obama’s current presidency has been helping to boost the images of United State to the rest of the world. Terrorist leader Bin Laden has been ranked on #37th most powerful person of the year, similarly philanthropist Warren Buffett is on #14. British Prime minister Gordon Brown is at rank 29. US Foreign secretary Hilary Clinton is at number 17 on the list where as Bill Clinton is at number 31 The Top 10 most power ful people of the world are listed below 1. U.S. President Barack Obama 2. Chinese President Hu Jintao 3. Russian Prime Minister Vladimir Putin 4. U.S. Federal Reserve Chairman Ben Bernanke 5. Google founders Sergey Brin and Larry Page 6. Carlos Slim, Chief Executive of Mexico's Telmex 7. Rupert Murdoch, chairman of
केहि नेपाली लोगगीत हरु , मुर्चुङ्गा बाट !
By सपनासंसार November 15, 2009
आफ्नो बेस्थता का कारण साईट समयामा अपडेट गर्न पाईरहेको छैन ! हाललाई मुर्चुङ्गा द्वारा बितरण गरिएका यी लोकगीत हरु सुनेर मजा लिनुहोस् । [यो प्रस्तुति कतै पुन प्रकाशित गर्नु परेमा स्रोत खुलाएर वा लेखकको पूर्ण सहमतिमा मात्र प्रकाशित गर्नुहुन अनुरोध छ । -सपनासंसार ]
शुरेश नेपाली, नेपाल भत्किन खोजेका घरका पर्खालहरु हावाका झोक्का र अविरल वर्षाबाट दिनदिनै भासिदैछन् अनि चियाईरहेछन् व्याँसोहरु प्वाल प्वालबाट ! आफ्नै सोचमा मग्न हुनेहरु स्वप्न बगैचाबाट हेरिरहेछन रमिता ! मेरा छोराछोरीहरु हो ! यै घरको आँगनमा तिमीले खेल्यौं यै छतमा टाउको जोगायौ आज घरका भित्ताहरु ढल्न खोज्दा ज्यान जोगाएर भाग्न खोज्छौ छतबाट पानी तपतपिदा भिज्ने डरले पर हट्छौं टालटुल त कता कता ! फर्केर हेर्दा पापै लाग्ला झैं आँखा तरेर हेर्छौ। आऊ ! हामी सबै मिली मर्मतसम्भार गरौं यसको वर्षौ वर्षसम्म नढल्ने गरी पुर्नजीवन दिउ यसलाई छिमेकीको आडमा बाँच्न खोज्ने छिमेकीको पिढींमा सहारा खोज्ने कस्तो संस्कार बोकेर आयौ? यि घरका भित्ताहरुले खोज्दैछन् तिमोरुलाई ढल्न खोजेका खाँबाहरु बोलाउदैछन सबैलाई ढल्न लागेको घरभित्र सगाल्नुछ सङ्लो आस्था धुरीभन्दा अग्लो आस्था। [यो प्रस्तुति कतै पुन प्रकाशित गर्नु परेमा स्रोत खुलाएर वा लेखकको पूर्ण सहमतिमा मात्र प्रकाशित गर्नुहुन अनुरोध छ । -सपनासंसार ]
दिन त जसै बित्दोरहेछ, रात नबित्दा पो आत्तिन्छु म ....
By सपनासंसार November 06, 2009
ससं र जुदने बीच सानो बाजा-बाज भएको थियो केही समय अगाडि फेसबुकमा। त्यो बाजा बाज जस्ता को तस्तै राखेको छु, सपनासंसार मा, तपाई पनि आफ्नो गुनासो तलको कमेन्ट बक्स मा हाल्नुभएमा आभारी हुने थिए ! जुदने : दिन त जसै बित्दोरहेछ, रात नबित्दा पो आत्तिन्छु म । दुनियाँ नशाले मातिन्छ, नशा नपिउँदा पो मात्तिन्छु म ।। ससं : त्यसै दुख्नु भन्दा अरूले हानेर दुखेको मजानै बेग्लै । नपिउँदै मात्तिनु भन्दा पिएर मात्तिनुको मजानै बेग्लै ।। जुदने : अरूले पिटेको दुख्दै दुख्दैन,मनको व्यथा सहनेहरू लाई । नशालु नशाले छुँदै छुँदैन,दुःखको नशामा रहनेहरू लाई ।। ससं : नसालु नसाले छुन्छ कि छुन्न, एक चोटि पिएर त हेर्नुहोस् । मनको व्यथा भुलाई दिन्छ, पिए पछि फेरि जिएर त हेर्नुहोस् ।। माथिका हरफ हरफहरू यथार्थ नहुन पनि र हुन पनि सक्छन् तर नसा वा मदिरा सेवन लाई ससंले दुरुत्साहित गर्दछ ! नखाने मित्रहरुले मदिरापान तथा नसापान मा भुलेरपनि नलाग्नु होला, जीवन वर्वाद हुन सक्छ। खाने मित्रहरुले